P3d Burbur V4 Add-ons Tab Baaba'aan ka dib markii uu ku dhacay USS Nimitz.
P3d Burbur V4 Add-ons Tab Baaba'aan ka dib markii uu ku dhacay USS Nimitz. sano 2 2 bilood ka hor #1076
P3D V4 lafteeda mararka qaar waxay dhacdaa marka diyaarad ku dhacdo garoonka dusha sare ee USS Nimitz. Kadib P3D shil - waan dib u bilaabay P3D V4 (maahan kombiyuutarka kombiyuutarka) the 'Add-onTaabku wuu ka maqan yahay, oo sidaas darteed dib ugama bilaabi karo USS Nimitz. Sida kaliya ee lagu heloAdd-ons 'Tab soo celinta ayaa ah in dib loo bilaabo kombiyuutarka. Tani uma dhacdana shil kasta oo diyaaradeed oo ku dhaca Nimitz. Tani waxay ku dhacdaa wax kabadan hal sameeyaha. Ma jiraan wax talooyin ah oo la mid ah habka diyaaradda diyaaradaha lagu rakibo; Wax talo soo jeedin ah?
P3d Burbur V4 Add-ons Tab Baaba'aan ka dib markii uu ku dhacay USS Nimitz. sano 2 2 bilood ka hor #1078
Hubi add-ons aad gelisay P3D. Diyaaradaha qaar (Afyareyn ayaa sababi kara shilal barnaamij) Haddii dhibaatadan ay si toos ah u bilaabatay ka dib soo degitaan bilaash ah, tirtir intaas add-on , ka dibna dib u bilow nidaamka oo arag haddii ay mar kale dhacdo. Xallinta khilaafaadka ayaa ah dhibaato caadi ah xilligan. Arrinta kale ayaa la soo dejisan iyada oo amniga internetka la damiyey.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: jjpamhawk
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.214